Xirashada Nigisyada nafiska leh ayaa kordhisa tirada Shahwada ragga… – Hagaag.com
Xirashada Nigisyada nafiska leh ayaa kordhisa tirada Shahwada ragga…
Posted on 10 Agoosto 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Daraasad laga soo saaray Mareykanka ayaa tilmaantay in xirashada nigisyada ama matantiga dabacsan ama nafiska leh ay tahay siyaabaha ugu fudud oo dadka u isticmaali karaan kordhinta tirada shahwada ama Sperms iyo hagaajinta wax qabadka hormoonada xukuma arrintaasi.
Daraasadda oo ay sameeyeen cilmi baarayaal ka socda kuliyada “Harvard T H. Chan” ee caafimaadka dadweynaha, daraasada ayaa lagu sameeyey 656 nin oo ku nool dalka Mareykanka iyada oo loo fiirsaday shahwada ragga xirta matantiga nafiska leh ay ka badan tahay 25% markii loo barbar dhigo ragga xirta matantiga am nigiska ciriiriga ah.
Heerkulka hoose ee xaniinyaha ayaa sabab u noqday.
Khubarada ayaa sheegaya in isbeddel ku yimaada qaab nololeed fudud loo maleynayo in uu kor u qaado bacriminta labka
Waxaa la og yahay in shahwada ay si xoogan u saameeyso heerkul ka badan 34 ° C, Taasi ayaa sabab u ah in qooraha ama xaniinyaha looga saaray banaanka jirka.
Cunista lowska “waxay kobcisaa” shahwada ragga.
Waxaa jira qaar ka mid ah naqshadaha matantiga ama nigisyada ay u dhoweynaaan xaniinyaha jirka, taasi oo keeni karta in xaniinyaha kululaadaan, marka loo barbar dhigo matantiga nafiska leh oo u ogolaado hawo.